လူလိမ် သတိထားပါ (ကျမဒီလောက်မအပါ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လူလိမ် သတိထားပါ (ကျမဒီလောက်မအပါ)
လူလိမ် သတိထားပါ (ကျမဒီလောက်မအပါ)
Posted by Novy on Aug 26, 2015 in Creative Writing, Think Different | 19 comments
လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် တစ်နေ့နေ့ တချိန်ချိန်မှာတော့ လူလိမ်လူညာလူယုတ်မာတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ရမှာမလွဲပါဘူး
လောဘနောက်လိုက်သွားရင်တော့ သေခြာပေါက်ဒုက္ခရောက်မှာပါဘဲ စဉ်ချင်တုံ တရားလေးမမေ့ကျပါနဲ့
ကျမ မနေ့ညကပူပူနွေးနွေး ကြုံလိုက်ရတဲ့ လူလိမ်တစ်ယောက်ရဲ့ လိမ်နည်းလေးကို အများသူငါသိရလေအောင်
ပြောပါရစေ အားလုံးလဲ သတိထားနိုင်အောင်လို့ပါ
တိုက်ကြီးက ကျမခြံကို ရောင်းဖို့ သတင်းစာမှာ ကြောငြာထည့်ဘူးပါတယ် ဆက်သွယ်ရမဲ့ ဖုံးအပါအ၀င်ပေါ့
မနေ့ည ၈နာရီ ၁၅လောက်မှာ လူတစ်ယောက်ဖုံးဆက်လာပါတယ် ခြံဝယ်ချင်လို့ပါတဲ့ ပိုင်ရှင်လား အကျိုးဆောင်လားတဲ့ ကျမကပိုင်ရှင်ပါလို့ပြောတော့ သူကတိုက်ကြီးကရဲမှူးသိန်းအောင်ပါတဲ့ ၃ဧကလောက်ခွဲရောင်းပါတဲ့ ဒီည ၉နာရီခွဲငွေလာချေပါ့မယ်တဲ့ ကျမအိမ်လိပ်စာတောင်ပြောလိုက်မိတယ်
ဒီအတိုင်းငွေချေလို့မရဘူး သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေရှေ့မှာ လုပ်မှရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဖုံးလိုင်းက သိပ်မကြားရတော့ဘူး ဒါနဲ့ ကျမပြန်ခေါ်လိုက်ပါ့မယ်ဆိုပြီး ဖုံးချလိုက်တယ်
အပြင်သွားနေတဲ့ ကျမအမျိုးသားကို ဖုံးဆက်ပြီးပြန်လာခိုင်းလိုက်တယ်
ပြီးတော့ သူဆီကိုပြန်ဆက်လိုက်တယ် တခြားဖုံးတစ်လုံးနဲပါ့ ပထမတစ်ခေါက် ဖုံးချလိုက်တယ်
ဒုတိယတစ်ခေါက်ခေါ်တော့ ကိုင်တယ် ရန်ကုန်မှာသူအစည်းအဝေးလာတက်တာပါတဲ့ သူ့မှာ ပိုက်ဆံပါပါတယ်တဲ့ တစ်ခါထဲ့ချေပါ့မယ်တဲ့ ခြံကိုေ၇ာက်ဘူးလို့လားဆိုတော့ သူရောက်ဘူးပါတယ်တဲ့ ထက်ကြည့်ရာမလိုပါဘူးတဲ့
ကျမခြံအပိုင်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုသိလားဆိုတော့ သိပါတယ်တဲ့ ကျမမသင်္ကာမကင်းစဖြစ်လာတယ် ကျမအကိုကြီးဖြစ်တဲ့ တိုက်ကြီး အထက ကကျောင်းအုပ်ကိုသိလားဆိုတော့ အဲလောက်တော့ မသိဘူးတဲ့ အသံကလည်း လူငယ်သံဖြစ်နေတယ် ရဲမှူးတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်က အနည်းဆုံးတော့ ၅၀ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်ရမယ်လေ ပြီးတော့ ရဲမှူးတစ်ယောက်က ကျမဆီကို ညကြီးမိုးချုပ် ခြံဝယ်ဖို့ ဖုံးဆက်ဖို့ဆိုတာ ပိုပြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး
နောက်ထက်သေခြာတာတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော့်ကို အကူအညီတစ်ခုလောက်ပေးပါတယ့် သူအမျိုးသမီးဆီကို ဖုံးခေါ်နေတာမရလို့တဲ့ သူ့ဖုံးကငွေကုန်ကာနီးနေလို့ ငွေလေးဖြည့်ပေးပါတဲ့ ကျမကြောင်သွားတယ် ပြီတော့ သဘောပေါက်လိုက်တယ် ဒီလူလူလိမ်ဘဲဆိုတာ ကျမခြံလည်းမရောင်းဘူး ငွေလည်းမလိုဘူး လာစရာလည်းမလိုဘူးလို့ ပြောပြီးဖုံးချလိုက်တယ်
ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲ ကျမခြံအပိုင်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီကိုဖုံးခေါ်လိုက်တယ် အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး တိုက်ကြီးကရဲမှူးနံမည်ကို စုံစမ်းလိုက်တယ် အဲဒီမှာတက်တက်စင်အောင်လွဲနေပါတော့တယ်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကကျမကို အကြံပေးပါတယ် ရန်ကုန်ကကျမတို့ ရပ်ကွက် အပိုင်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီကို သတင်းပို့ထားလိုက်ပါတယ် သော့တွေလုံခြုံအောင်လုပ်ဖို့ တံခါးမဖွင့်ပေးဖို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်
ကျမလည်းရပ်ကွက် အပိုင်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီကိုဖုံးဆက်ပြီးအကူအညီတောင်းရပါတယ်
သော့တွေလုံခြုံအောင်လုပ်ဖို့ တံခါးမဖွင့်ပေးဖို့ထက်ပြီးသတိပေးပါတယ် လူလိမ်အိမ်ကိုရောက်လာပါက
ကျမလည်း သော့တွေလုံခြုံအောင်လုပ်ပြီး စောင့်နေလိုက်ပါတယ် မောင်မင်းကြီးသားကတော့ ရောက်မလာပါဘူး လူလိမ်ရဲ့ ဖုံးလေးကို မှတ်ထားလိုက်ကျပါအုံး
အရင်ကဆိုရင်တော့ ဆက်သွယ်ရေးမှာဖုံးနံပါတ်ကိုစစ်လိုက်ရင် ဒီလူကိုဖမ်းမိမှာပါ အခုတော့နေရာမရွေး ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ ကဒ်တွေဝယ်လို့ ရနေတော့ ဘယ်လိုမှလိုက်လို့မရတော့ပါဘူး
လောဘနောက်မလိုက်ဘဲ စဉ်ချင်တုံ တရားလေးမမေ့ကျပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါရစေ
ဒီနေရာကနေ တိုက်ကြီးက ချင်းကုန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နဲ့ ကျမလည်းရပ်ကွက် အပိုင်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်လို့
မားနိုခြံကို မီဝယ်ဘဲ ရအောင် လှုပ်ပြမဲ… ငှီး ငှီး ငှီး…။ မားနိုကိုယ်ဒိုင် လိုလိုလားလားနဲ့ တားကြောင်ကြီး ယူဆေစိုပီး လာဘ်ထဲ စာချုပ် ထိုးထည့်ဇေယျမဲ…. ငါကွ။
ကံကောင်း ညာဏ်ကောင်း လို့ပါလား မွမွနိုရေ။
ခေါင်းစဉ်အရတော့ လူလိမ်တွေက ပြန်သတိထားရတော့မဲ့ သဘောပဲ။
. သူ့ဖုံးကငွေကုန်ကာနီးနေလို့ ငွေလေးဖြည့်ပေးပါတဲ့…ဒုက္ခော
.မနေ့ကလည်းဖွဘုတ်မှာ မိန်ကလေးဓါးပြ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ဓါးထောက်ငွေတောင်းတာဖတ်လိုက်ရတယ်
ဧကန္တ ဖုန်းဘေလိုချင်လို့နဲ့ တူတယ်။ ဟီးးးးးးးးးး
ဟိုတလောကလဲ သိန်း၅၀ကျော်ကံစမ်းမဲပေါက်တယ်ဆိုပီး ၁၁သိန်းလွဲခိုင်းတဲ့လိမ်နည်းတဲ့ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ် ခုလဲတမျိုး နည်းကမျိုးစုံရယ် တနည်းသိ တနည်းမှတ်ရတာပေါ့ ကျေးကျေးပါ
အခုတလော… လိမ်တာတွေ… မတရားလုပ်တာတွေ…ခေတ်စားနေတယ်…
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိတဲ့ ခေတ်မို့….
အကြောက်တရား အရှက်တရားကို စွန့်ပြီး…ဝမ်းစာကို သိက္ခာနဲ့ လဲရတဲ့ခေတ်မို့….
မောင်တူ၇ တီနို့ အစားသားပဲပြောလိုက်ပါကွယ်
ကိုမျိုးရေ သူ့ တောင်ကျေးဇူးကျိတ်တင်နေရတယ်
ဖုံးဖေမဖြည့်ခိုင်းပဲအိမ်ရောက်အောင်လာပြီ ဓါးထောက်သွားရင် ဒုက္ခ
မားနိုကိုယ်ဒိုင် လိုလိုလားလားနဲ့ တားကြောင်ကြီး ယူဆေစိုပီး လာဘ်ထဲ စာချုပ် ထိုးထည့်ဇေယျမဲ…. ငါကွ။
ဇီဇီရေ လိမ်နည်းပေါင်းကို စုံနေတာပါပဲတော်
မမအေးရေ .. အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် နိုနိုတို့လည်း နေတိုင်းတော့ ငါးပါးသီလမမြဲပါဘူး
ဒါပေမဲ့ သူများအကျိုးယုတ်အောင်တော့ ဒီနေ့ထိမလုပ်ဘူးပါဘူး
လေ့လာမှတ်သား သင်ခန်းစာယူသွားပါတယ် ဗျာ…။
လူအတော်များများ ကိုယ့် ၀ိရိယ နဲ့ ကို ယ် ၀ါ ယ မစိုက်ထုတ်အလုပ်မလုပ်ချင်ဘဲ
အချောင်ရ တဲ့ နည်းလးမ်တွေဘဲ စဥ်းစားနေကြတာများပါတယ်
အဲတော့ သတိနဲ့ နေနိုင်မှ တော်ကာကျမယ်
အန်တီအဖေကိုယ်တိုင်ကသူရဲ့ မိတ်ဆွေဆီမှာယုံကြည်စွာနဲ့ အပ်နှံထားရှိတာ။ပြန်မပေးတော့ဘဲ
မနေသာနိုင်ကြတော့ လူလူချင်းလည်းကိုယ်ချင်းစာစိတ် ကင်းမဲ့တတ်ကြပါတယ်။။။